Yelp र Google समीक्षा क्याप्चर गर्नुहोस् अनुप्रयोगबाट तपाईंको ग्राहकहरू प्रयोग गर्नुहोस्! | Martech Zone
धेरै समय अगाडि हामीले यसका लेखक डेनियल लेमिनसँग एक राम्रो अन्तर्वार्ता लिएका थियौं ManipuRATED: कसरी व्यवसाय मालिकहरूले कपटपूर्ण अनलाइन रेटिंग्स र समीक्षाहरू लड्न सक्छन्। उनले समीक्षा ताजा गर्ने महत्त्वमा दुबै ताजा समीक्षा र कहिलेकाँही उठ्न सक्ने कुनै पनि नकारात्मक समीक्षाको सामना गर्न बोले।
के त्यहाँ एक उत्तम समीक्षा क्याप्चर गर्न को लागी उत्तम समय हो जब एक संतुष्ट ग्राहकले तपाईको व्यवसाय छोड्छ? सायद होईन - त्यसो भए किन त्यस्तो प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्नुहोस् कि अधिक समीक्षा ड्राइभ गर्दछ र यसलाई सजिलैसँग गर्दछ। पूनरावलोकन त्यो कुरा तपाईंको संरक्षकलाई एसएमएस मार्फत लिंक पठाउँदछ। जब संरक्षकले परिणामस्वरूप ल्यान्डि page पृष्ठ खोल्दछ, पृष्ठले उनीहरूको स्मार्टफोनमा येल्प मोबाइल अनुप्रयोग वा गुगल मोबाइल अनुप्रयोगको लागि मूल लिंकहरू उत्पादन गर्दछ।
किनभने अनुप्रयोगहरू पहिल्यै लगइन भइसकेको छ, यसले ग्राहकलाई खुसीबाट कागजातमा सार्न आवश्यक पर्ने चरणहरूको संख्या कम गर्दछ! प्रत्येक सकारात्मक समीक्षा क्याप्चर गर्दा तपाइँको व्यवसाय मा एक प्रभाव छ, त्यसो भए किन यसलाई हरेक पटक कब्जा छैन? यो अक्सर समीक्षा एल्गोरिथ्मको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ - जसले उनीहरूको मात्रा मात्र होईन, समीक्षाको रिसेन्सीमा जोड दिन्छ।
पूनरावलोकनहरू जुन यसमा समावेश छ
डीप लिinking्क गर्ने सेल फोन टेक्नोलोजी
तपाईंको YELP को एकीकरण! र गुगल खाताहरू
एक जोडिएको वितरणको लागि एक वेब पृष्ठमा तपाइँको सबै समीक्षाको एकत्रीकरण
फलो-अप ईमेल समीक्षा प्रणाली
जारी गोल सेटिंग र टीम प्रशिक्षण
टैग: गुगल मोबाइल समीक्षागुगल मेरो व्यापारगुगल समीक्षामोबाइल समीक्षात्यो कुराको समीक्षा गर्दछएसएमएसएसएमएस समीक्षापाठपाठ सन्देशभुकनुचिल्ला समीक्षा
Account चरणहरू एक सफल खातामा आधारित मार्केटिंग रणनीति